Xiaomi Mi 11: Fanadihadiana, toetra sy fisedrana fakan-tsary | Androidsis
Ny orinasa aziatika dia manohy miasa mafy manolotra terminal amin'ny karazany rehetra, amin'ny zavatra iray Xiaomi tsy mijanona amin'ny fandefasana tsy tapaka izay saika mahatonga antsika hamoy tena amin'ity ranon'ny terminal ity. Amin'ity tranga ity, araka ny hitanao, izahay dia hifantoka farafaharatsiny amin'ny marika manaitra indrindra an'ny marika "avo lenta" farany.
Manana an-latabatra ilay Xiaomi Mi 11 vaovao isika, fitaovana "ambony" izay tonga hifaninana amin'ny tsara indrindra eny an-tsena, mendrika ve izany? Jereo miaraka aminay izay tombony azo avy aminy ary mazava ho azy inona ny lesoka mba hahafahanao mandinika tsara ny fividiananao.
3 Fizarana multimédia
Ity Xiaomi Mi 11 ity dia tsy ampoizina indrindra noho ny fiolahana, tsy handà izany izahay. Raha nampalaza ny fihodinan'ny sisiny izay natoron'i Huawei ihany koa i Samsung, dia satro-boninahitra izy ireo, anisan'izany ny curvature amin'ny tendrony rehetra, ny roa hafa miharihary eo amin'ny sisiny, ary ny roa hafa kely kokoa eo ambony sy ambany. Zava-tsiro, na dia tiako manokana aza ny efijery malama, dia marina fa mahafinaritra ny mikasika ny maso, mifanitsy mivantana amin'ny fanoherana ny terminal.
lanja: Gramin'ny 169
Any aoriana dia misy vera tena tsara tarehy misy fiolahana vitsivitsy, izay mazàna fa ilay maodely fakan-tsary telo lehibe dia mazava fa manjaka. Farafaharatsiny, ny sisin'ny vy dia manampy mitazona ny terminal, izay tsy misy fonony dia tena mampatahotra. Mahagaga izany noho ny fahazavany, vitsivitsy grama eo ambanin'ny mpifaninana mivantana Samsung Galaxy S21 na Huawei P40 Pro. Eo an-tanana dia mahatsiaro ho premium izy ary izany no tianay hamindra azy aminao. Raha naharesy lahatra anao izy, dia azonao atao ny mividy azy amin'ny vidiny tsara indrindra amin'ny Amazon.
Xiaomi dia tsy afaka nivily lalana tamin'ity terminal ity, ary efa izany. Famoahana ny Qualcomm Sanpdragon 888 manana hery mihoatra ny voaporofo sy fahombiazana. Ho an'ity dia hiaraka amin'ny RAM 8GB ao amin'ilay kinova izay notsapainay. Izany dia nanome antsika valiny amin'ny Geekbench an'ny 1.127 / 3.754, ambonin'ny Galaxy S21 Ultra sy ny OnePlus 8 Pro.
Famaritana ara-teknika Xiaomi Mi 11
modely Mi 11
Operating System Android 11 miaraka amin'ny MIUI 12
efijery 6.81 "AMOLED miaraka amin'ny vahaolana QHD + / 120 Hz sy HDR10 +
Tahiry anatiny 128 / 256GB
Fakan-tsary aoriana 108MP / 13MP Ultra Wide Angle 123º / 5MP Makro
Fakan-tsary aloha 20MP miaraka amin'ny vavahady f / 2.4
Conectividad Bluetooth 5.2 - USBC - WiFi 6 - 5G - GPS - NFC - Infrared
Fitaovana hafa Sora-pikantsary eo amin'ny efijery - mpandahateny stereo
bateria 4.600 mAh misy fiampangana haingana 55W ary fiampangana 50W Qi - Fiampangana miverina hatramin'ny 10W
lafiny 164.3 X 74.6 X 8.06
Heveriko fa miharihary fa amin'ny haavon'ny herinaratra sy ny fahombiazana dia tsy hanana na inona na inona isika. Tokony hotadidintsika fa ny modem 5G X60 dia nampidirina tanteraka tao anaty processeur mba hitehirizana bateria betsaka araka izay azo atao ary miorina amin'ny maritrano 5nm izy io. Ny fampisehoana dia tsara tamin'ny fitsapana, sady misy ny asa mahazatra no mitaky zavatra bebe kokoa amin'ny lalao, eny, angamba nahatsikaritra mari-pana tafahoatra isika tao an-damosina rehefa nilalao, tsy nisy nampatahotra.
Tendrombohitra Xiaomi eo amin'ny tontonana Mi 11 anao AMOLED 6,81-inch izay misy fehin-kevitra 3200 x 1440 QHD +, fantatra amin'ny anarana hoe 2K. Ity takelaka ity dia hanana taham-pahavitrihana 120 Hz, eny, mamaritra i Xiaomi fa ho "mahay mampifanaraka" izy ireo, noho izany dia miova arakaraka ny filan'ny fitaovana ny valiny, na dia tsy tsikaritray aza fa misy ny fahasamihafana amin'ny fampiasana isan'andro. Manana ny tahan'ny 20: 9 sy ny hakitroky ny pixel isaky ny santimetatra 515. Voalamina tsara ny tontonana, miaraka amin'ny fotsy mangatsiaka somary azontsika atao ny manitsy ny toerana sy ny loko izay tsy mahasalama loatra. Ny famirapiratanana mandeha ho azy dia nanome antsika olana hafa amin'ny fanitsiana tsy miankina, fa mankafy 1.500 nits izahay izay mahatonga azy io ho tsara tarehy ety ivelany ary mifanohitra amin'ny 5.000.000: 1 tsara be.
Fampiasana ny eo aloha: 91,4%
Ny lavaka eo amin'ny efijery amin'ity indray mitoraka ity dia mijanona somary havia, mety ho haingana kokoa izy io, saingy tsy mahasosotra. Raha ny momba ny feo dia manana mari-pahaizana stereo izahay, na eo aza ny fanandramana, somary fisaka ny kalitao, na dia ny habetsaky ny 83db dia mihoatra ny ampy. Ny kalitaon'ny feo dia asa mbola miandry ao Xiaomi.
Amin'ny sary mandeha ho azy habe mahazatra nahita fiarovana tsara izahay tamin'ny toe-javatra nandrasana, na dia miha mifanohitra tanteraka aza ny maody mandeha ho azy. Hitanay fa tena misy ny loko ary ny HDR mandeha ho azy dia hanamora ny zavatra anay. Ny Mode Night amin'ny tranga misy azy dia manome valiny tsara ary ny sary amin'ny endrika 108 MP dia mampiseho ny nifiny, indrindra rehefa manitatra ilay sary isika.
The Wide Angle teo ambanin'ny haavon'ny fakantsary lehibe indrindra io, indrindra rehefa apetratsika eo alohan'ny fifanoherana mahery vaika, mahasalama ny loko bebe kokoa ary tabataba hita eo. Amin'ny alina ny valiny dia araka ny nampoizina, saingy tsara ny mandinika ireo toetra.
Portrait Mode Mbola be ny asa tokony hatao, ny fihoaran'ny rindrambaiko ary ny zava-misy fa manana olana goavana izy rehefa maka sary zavatra izay tsy olona dia afaka mametraka zavatra ambony, tsy misy isalasalana fa ny fomba ratsy indrindra noresahana. Tsy izany amin'ny sary amin'ny endrika akaiky kokoa, izay nahazoana vokatra tsara indrindra, na dia eto aza dia mazàna no mila hazavana bebe kokoa.
Ary farany, ny fakan-tsary voalohany dia manome antsipiriany sy fifanoherana tsara, na dia ny famonoana ilay "fomba hatsaran-tarehy" be loatra aza dia toa tsy maintsy atao. Tsara ny mampandeha ny maody HDR satria mety hanana olana amin'ny jiro ny fakantsary, na dia mampiadana ny fitifirana aza izany.
Farany, miavaka ny horonan-tsary amin'ny antsipiriany tsara sy ny fanamafisana tsara, manitsy ny fangovitana tsara sy voajanahary, ity lafiny ity dia nanaitra anay, eny, niaraka tamin'ny fakantsary lehibe indrindra. Mazava ho azy fa amin'ny tabataba amin'ny alina dia misy ny olana miseho, saingy mbola miady tsara amin'ny jiro izy ary mitazona ny antsipiriany.
Misy fiantraikany kely amin'ny fizakan-tena ny 120Hz, fa ny 4.600 mAh amin'ny lafiny fiarovana dia miaro tsara ny tenany. Manohana ny famandrihana haingana 55W, 50W ho an'ny famahanana tsy misy tariby ary 10W ho an'ny famerenana amin'ny laoniny. TManana tombony isika fa tafiditra ao ny charger ary fanomezana dia manarona (mahazatra) izahay. Manodidina ny iray andro ampiasaina amin'ny fikirakirana eo anelanelany, eny ny haben'ny bateria eo anelanelan'ny 60Hz sy 120Hz dia mahery setra.
Ny fiampangana feno dia hitondra antsika mihoatra ny 1h, na dia ao anatin'ny 25 minitra aza dia nahavita 0% ka hatramin'ny 50% izahay. Ny zavatra niainantsika ankapobeny tamin'ny terminal dia tsara, na dia mijaly noho ny endri-javatra fanampiny aza ny bateria ary mamela izany dingana iray any ambadiky ny faran'ny avo kokoa amin'ity lafiny ity. Raha tianao izany dia azonao atao ny mividy azy amin'ny 749 amin'ny kinova manga sy mainty ao Amazon.
Volavola sy fampiasa izay mahatsapa ny Premium
Endri-javatra maro sy efijery tsara
Miaritra 120 Hz ny bateria
Ny fakan-tsary dia dingana iray ao ambadiky ny vidiny
Tonga atahorana manakaiky ny vidiny lafo be
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » hevitra » Xiaomi Mi 11: Fanadihadiana, toetra sy fisedrana fakan-tsary